Ubhale ibhuku ngomlando wamaqhawe
UNKSZ Khethiwe Zulu ekhombisa ngomdlalo wamaqhawe omzabalazo obizwa ngokuthi, Did You Know? Isithombe: Bongani Mbatha/ African News Agency(ANA)
OWESIFAZANE waseThekwini obhale izincwadi ezikhuluma ngomlando wezingqalabutho okuqanjwe ngazo imigwaqo emisha kuleli dolobha, uthi uhlose ukufundisa abantu ngomlando wala maqhawe omzabalazo.
UNksz Khethiwe Zulu (40), obhale izincwadi ezimbili ezisihloko sithi, A Beginners Guide to the History Behind Street Names nethi A Beginners Guide to the Women in the Liberation Struggle, uthe ukholwa wukuthi izincwadi zakhe zizolekelela kakhulu ekuvuleni imiqondo yabantu abasenokudideka ngomlando wokuqanjwe ngabo imigwaqo.
“Ngalezi zincwadi ngifisa abantu baqonde umlando wabantu esasididekile ngabo sonke ukuthi kungani kuqanjwe imigwaqo ngamagama abo. Ngiyethemba ukuthi kuzosisiza kakhulu ukwazi ngabo ukuze sizigqaje ngemisebenzi emihle abayenza besaphila,” kuchaza uNksz Zulu.
Echaza ngemininingwane ayisebenzise ebhala izincwadi zakhe, uthe ukuhlanganisa ulwazi abeludinga kwamthatha isikhathi njengoba ayebuye athathe ikhefu ngenxa yezinto ezazimphula umoya ayezithola ngesikhathi efunda ngomlando wabantu ababehlukunyezwa ngesikhathi sobandululo.
Uthe ngesikhathi esazihlanganisa izincwadi, wabe eseqhamuka neqhinga lomdlalo ongadlalwa ngabantu ohambisana nazo nofundisa ngomlando.
Lo mdlalo uthe unoqwembe, idayisi nezinkinobho okudlalwa ngazo uma sekugingqwe idayisi. Uthe kunemibuzo okumele uqale uyiphendule yomlando waseNingizimu Afrika ngaphambi kokuthi uqale ukuwudlala.
“Lo mdlalo ngihlose ukufundisa ngawo abasashoda ngolwazi lo mlando wezigagayi zomzabalazo. Nezingane zesikole zizozuza kakhulu kuwona,” kuqhuba lo mbhali othe uthando lokubhala waba nalo eseneminyaka engu-13.
Phakathi kwezingqinamba abhekane nazo, ubale ukungatholakali kalula kosizo lwabaxhasi.
Uphinde waveza ukuthi umsebenzi wokubhala unakho ukwenza umuntu abe yinkomo edla yodwa isikhathi esiningi ngoba udinga ukuthi umuntu abe yedwa ukuze akwazi ukubhekana nomsebenzi asuke ewenza ngaphandle kokuphazamiseka.
Uthe yize lokho kusiza ekutheni umuntu abalekele ukwenza amaphutha amaningi, umzwangedwa uyabulalana uma ungumbhali.
Ephetha uthe yize kunezingqinamba ezimhaqayo, uyakujabulela ukuba nabasebenzi abane enkampanini yakhe, iCreative Boss, epakisha izincwadi ezithengiwe.